Kuratidza zvinyorwa neelebheri Oborský rybník
Jinolice Masango ndeye hurongwa hwemadziva matatu ari pedyo neguta reJinolice muBehemian Paradhiso PLA, inenge 5 km kubva Jicin. Iko inosanganisira mabhuna Oborský, Němeček naVražda, ayo anodyiswa nemazita asina zita anogadzira javornice.
Iyo system inowanikwa mumupata wakakura pakati peJavornická unopisa kuchamhembe ne Prachov ridge kumaodzanyemba (Prachovské skály uye mutsara unobatanidza wezvikomo Přivýšina - Brada). Madziva ndeimwe yenzvimbo dzinotsvakwa kwazvo munzvimbo dzeBohemian Paradise. Madziva maviri ari ekuvaraidza, kune misasa yeruzhinji, misasa, dzimba dzekugara. Chiteshi chepedyo chechitima chiri muJinolice, kubva pairi chinotungamira pamakungwa nzira yevashanyi nzira yekuenda kuPrachov, njanji yeruvhu inotungamira kubva kumadziva kuenda kumharadzano Pod Privýšinou.
Oborský (nzvimbo 11,4 ha) - yakakura kwazvo yehurongwa; nhandaro (jecha pasi, jecha uye huswa pamhenderekedzo, inoshandiswa kushambira nemitambo yemvura); nzvimbo dzakanyorova kumadokero kusvika kumaodzanyemba akadziva kumadokero kumahombekombe akachengetedzwa seyemusikirwo chiumbwa Oborská luka. Němeček (nzvimbo 5,2 ha) - mafaro; inopa kugeza (kunyanya…